Caalamka, 01 October 2019
Talaado 1 October 2019
Saalax Khaashuqji oo difaacay boqortooyada Sacuudiga
Wiilka suxufiga reer Sacuudi ee la dilay ee Jamal Khaashuqji, kaasi oo beeniyey inuu heshiis lacageed la gaaray dowladda, ayaa maanta aad u difaacay boqortooyada, ka hor sanad guuradii koowaad ee dilka.
Salami: Burburinta Israel hadda kadib ma ahan riyo kaliya
Taliyaha ciidamada Ilaalada Kacaanka Islaamiga ah ee Iran ayaa sheegay in burburinta cadowgooda koowaad ee Israel ay noqotay “hadaf lagu guuleysan karo” sababo la xiriira horumarka teknooloji ee dalkiisa uu sameeyey.
Bin Salmaan oo sheegay inuusan dooneyn dagaalka Iran
Dhaxal-sugaha Sacuudiga Maxamed Bin Salmaan ayaa wraeysi uu bixiyey axaddii ku sheegay in dagaal dalkiisa uu la galo Iran uu burburin doono dhaqaalaha dunida, sidaas darteedna uu door bidayo xal aan ahayn mid militari.
Xuutiyiinta oo 'sii daynaya maxaabiis Sacuudiyaan ah'
Maleeshiyada Xuutiyiinta Yemen ayaa sheegay inay maanta sii deyn doonaan 350 maxaabiis oo ay ku jiraan saddex u dhashay dalka Sacuudiga, taasi oo qeyb ka ah hindise nabadeed oo ay waddo QM.
Barnaamijka Wicitaanka Dhageystaha ee toddobaadkan waxaa marti ku ah Xildhibaan Faysal Xasan oo ka tirsan baarlamaanka gobolka Ontario ee dalka Canada, waxaana su'aalo laga weydiin doonaa sharciyo cusub ee bulshada Soomaalida ahi ay ka biyo diiddan tahay
Shiinaha oo Xusaya 70-sano-guurada Shuuciyaddooda
Shiinaha ayaa maanta u dabaaldagaya sannadguuradi 70-aad ee marki la aas-aasay Jamhuuriyadda Shuuciga ah ee Shiinaha.
Iran oo sii Deysay Markabkii Britain
Markabkan oo lagu magacaabo Stena Impero, kaas oo lagu hayey deegaanka Bandar Cabbaas ee dalka Iran, in ka badan labo bilood, ayaa bilaabay inuu ka dhaqaaqo dalkaas Jimcihii dorraad, isago oo gaaray Dubai Sabtidii shalay
Madaxweyne Jacques Chirac oo geeriyooday
France ayaa barooraneysa madaxweynihii hore ee dalkaas, siyaasi rug cadaa ah, iyo u ololeeye midnimada Yurub iyo Afrika, Jacques Chirac oo maanta geeriyooday isaga oo 86 jir ah.
Erdogan oo ka digay in la eedeeyo Iran
Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ku baaqay in laga fiirsado in Iran lagu eedeeyo weerarkii 14-kii bishan lagu qaaday goobo saliidda laga soo saaro oo ku yaalla dalka Sacuudiga.
Rivlin oo nolol siyaasadeed cusub siiyey Netanyahu
Madaxweynaha Israel Reuven Rivlin ayaa nolol siyaasadeed oo cusub siiyey ra’iisul wasaare Benjamin Netanyahu, isaga oo weydiistay inuu soo dhiso dowlad cusub oo wadaag ah, kadib markii laba goor uu lix bilood gudahood ku guul-darreystay inuu guul cad ka gaaro doorashada.
Saameynta go'aanka Maxkamadda Sare ee Britain
Maxkamadda sare ee Britain oo diiday go'aanka Johnson